Markab ay leeyihiin ciidamada Badda Ee Mareykanka Oo Shil Galay | Saxil News Network
Todobo kamid ah ciidamada badda ee Mareykanka oo sarnaa Markab dagaal oo la yirahdo USS Fitzgeralds ayaa la la’yahay kaddib markii markab ay sarnayeen uu ku dhacay Markab kale oo siday xamuul oo ku sugnaa xeebaha dalka Japan.
Dadka ku dhaawacmay shilkani waxaa la sheegay inuu kamid yahay taliyaha ciidamaadii sarnaa markabka oo markii dambe loola cararay cisbital, waxaana uu shilkani ka dhacay meel 104 kilomitir dhanka koonfureed kaga began magaalada Yokosuka ee dalka Japan.
”Taliyihii ciidamadii sarnaa markabka xaaladiisu waa ay ka soo reyneysaa, waxaana la geeyay cisbitaal ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin magaalada Yokosuka”, waxaa sidaasi sheegay sarkaal katirsan ciidamada badda ee Mareykanka.
Image captionMarkabka xamuulka ee shilka galay
Goobta uu shilka ka dhacay ayaa hadda ah mid aad u mashquul badan, madaama ay marin u tahay maraakiibta u socda caasimada Japana ee Tokyo.
Image captionGoobta uu shilka ka dhacay
Markabkan dagaal ee shilka galay oo la yirahdo USS Fitzgerald ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid kamid ah maraakiibta ugu casrisan Mareykanka ee dhanka dagaalka, waxaana ku rakiban baa la yiri qalab casri ah oo uu kamid yahay radaar la socda dhaqdhaqaaqa howlaha markabka.